Cummaan oo xayiraad ku soo rogtay 8-dal oo Afrikaan ah - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Cummaan oo xayiraad ku soo rogtay 8-dal oo Afrikaan ah
Cummaan oo xayiraad ku soo rogtay 8-dal oo Afrikaan ah
Muqdisho (Walwaal Online)- Dowladda Cumaan ayaa ku dhawaaqday go’aan ay muddo 15 maalmood dalkeeda uga xayirtay dadka kasoo safra 10 waddan, si ay u xakameyso fiditaanka cudurka Covid-19.
Tobanka waddan waxaa ka mid ah siddeed dal oo ku yaalla qaaradda Afrika. Waxay kala yihiin: Suudaan, Koonfur Afrika, Nigeria, Tanzania, Ghana, Itoobiya, Guinea iyo Sierra Leone. Labada dal ee kale ayaa kala ah Brazil iyo Lubnaan.
Xayiraaddan ayaa dhaqan galeysa laga billaabo maalinta Khamiista ah. Go’aankan ayaa saameynaya dadka kasoo safra dalalka haddii ay soo maraan waddamada xayiraadda lagu soo rogay, haddii ay ugu 14 maalmood gudahood tahay.
Previous articleDF oo si cad u diiday in banaanbaxa ay iclaamiyeen musharaxiintu lagu qabto muqdisho
Next articleWasiirka A/Dibadda Soomaaliya oo laga helay COVID-19 isagoo jooga Burundi